ABSDF မကဒတ ၂၇ နှစ် မွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် Dr Myint Cho ပြောကြားသော ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက် ~ Nge Naing
Posted in: သမိုင်းဝင်နေ့များ,နိုးဆော်လွှာ
November 21, 2015 at 12:42 AM Reply
November 28, 2015 at 1:17 AM Reply
February 17, 2016 at 5:31 AM Reply
သူခိုးကြီး ရွှေမန်းရယ် တိုင်းပြည်ရဲံ့ သယံဇာတတစ်ဝက်လောက်ကို တိုင်းမှုးဘ၀ ညှိနိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးဘ၀နဲ့ မတန်တဆ သိမ်းယူထားပြီး အခု သားတွေအမည်နဲ့ ဘီလျှံနာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ
အောင်ခိုင် (Aung Tha Nge) ရေးတဲ့ ပို.စ်ကနေ သိလိုက်ရတာက အောင်မိုးဝင်းက ကွန်မင့်ရေးပြီး မကဒတကို လှောင်သလို ပြောင်သလိုနဲ. စော်ကားခဲ့တယ်။
နောက်သိပ်မကြာဘူး မေသင်္ကြန်ဟိန် က မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို အကြောင်းပြပြီး မကဒတကို ထပ်လက်ညှိုးထိုးထားပြန်တယ်။ သူ.ပထွေးကြံ.ဖွတ်နဲ. အစိုးရရဲ. တရားရေးဖေါက်ပြန်မှုတွေကိုတော့ မဝေဖန် မထောက်ပြရဲရှာဘူး။
November 6, 2016 at 2:56 AM Reply